Diamondra Hafakely Naseho Tamin’ilay Foara Tany Botswana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Batak (Toba) Catalan Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Galicienne Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Télougou Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà
Diamondra Hafakely Tany Botswana
Any Botswana no misy ny diamondra lafo indrindra eran-tany. Diamondra hafa mihitsy anefa no nasehon’ny Vavolombelon’i Jehovah tany, nandritra ny foara iray tamin’ny 22 Aogositra ka hatramin’ny 28 Aogositra 2016. Ireto avy no hita teo amin’ny trano hevan’izy ireo: Boky sy gazety miresaka an’izay lazain’ny Baiboly, ilay tranonkala jw.org, ary video manampy ny fianakaviana hifankatia kokoa.
Naseho teo amin’ilay trano heva, ohatra, ireo video hoe Ataovy Namanao i Jehovah. Variana ny ray aman-dreny sy ny ankizy rehefa nahita an’ilay izy. Atoro ao amin’izy ireny hoe ahoana no ampiharana ny toro lalan’ny Baiboly. Misy amin’ny fiteny setswana, fiteny ofisialy any Botswana, ny video sasany, ka maro no nanontany hoe ahoana no hahazoana azy ireo.
Avy any amin’ny faritra rehetra ao Botswana ireo mpitsidika, ary boky sy gazety 10 000 teo ho eo no nozaraina tamin’izy ireo. Nisy olona 120 koa nangataka hoe hampianarina Baiboly maimaim-poana. Maro no gaga rehefa nahita fa niara-niasa tsara ny Vavolombelon’i Jehovah miteny anglisy sy ireo miteny setswana nandritra an’ilay foara.
Notsaraina avy eo ireo trano heva sy ny fampirantiana hafa, ka ny Vavolombelon’i Jehovah no nahazo ny loka voalohany.
Tianao ho fantatra ve ny momba anay sy ny zavatra inoanay? Manana fanontaniana momba ny Baiboly ve ianao? Jereo ato ny valiny.
Tian’i Jehovah ho sambatra ny fianakaviana. Jereo ato ny torohevitry ny Baiboly ho an’ny mpivady, ray aman-dreny, ary zanaka.
Fanaterana Boky Ara-baiboly any Congo
Fampirantiana Baiboly Tena Niavaka Tany Frantsa
Fampahafantarana ny JW.ORG Nandritra ny Foara Momba ny Boky Tany Toronto